उत्कर्षमा सत्ता झम्टा-हनाई ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, मंसिर २१, २०७७ मा प्रकाशित
हौ भिरघरे ! लुभन्त नेपालमा सबभन्दा धनी नेता को हो !
किन हौ काका ! कारवाही नै गरौंला जस्तो गरेर सोध्छौ त ! झुम्री काकीलाई सोधन भन्दी हाल्छिन् नि ! यो भन्दा त सबै विश्लेषण गर्नु पर्छ । रहनसहन, उठवस्, शानसौकत लहन-तहन, भनसुन, आफन्त, ठेक्कापट्टा सप्पै पैल्याउनु पर्छ थाहा भै हाल्छ नि । अब दुई चार वर्ष हो काका त्यसपछि छानविन हुन्छ । दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट पुरुष र भ्रष्ट महिला भनेर पहिला युरोप अम्रिकातिरका पत्रपत्रिकाले लेखेका थिए क्यारे !
त्यो मूलाहर्ले लेखेर हुन्छ भिरघरे ! तिनार्ले त वाइयात लेखेका थिए त्यस बेला ओली, देउवा, माधवकुमार नेपालहर्लाई लेख्न पर्ने हाम्रा काम्रेड प्रचण्ड, बाबुराम, हिसिलाहर्लाई लेखेको थियो । एकपल्ट लुटपाट गर्‍यो, जबरजस्ती चन्दा असुल्यो, बैंक लुट्यो, ठेक्कापट्टामा ब्रम्हलुट गर्‍यो, पाँच हजार मान्छे मार्‍यो, आफ्ना तीन हजार लडाकुलाई ३३ हजार भएको दावी गर्दै लडाकुको १२-१३ अरब आफ्नै ढुकुटीमा राख्यो भन्दैमा सधैं अपराधी हुन्छ । ती साम्राज्यवादीहर्ले हामीलाई देख्न नसकेको । बुझिस भिरघरे !
तिमी के कुरो गर्छौ बुढा । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति रहन-सहन कस्को बढी छ र तामझाम बढी कस्को छ त्यो नै धनी भन्छन् । अब तिम्रो महान सर्वहारा काम्रेडलाई भन्न मिलेन । अब यिनै ओलीहरु भन्दा भैगो नि !
निउँ, खोज्ने कुरो नगर झुम्री ! २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रको सम्पत्तिमा रजगज गरेर बसेकाहर्ले हामीलाई धनी देख्ने ? हाम्रो काम्रेडले चैं जोगी बन्न राजनीति गरी दिनु पर्ने ? पक्कै पनि अरुको भन्दा हाम्रो कार्यकारी प्रमुख अध्यक्षको हेर्दा अलि बढी देखिन्छ । तामझाम अलि बढी जस्तो लाग्छ । तर एउटा पौडी खेल्ने पोखरी, यसो लनटेनिस-ब्याडमिन्टेन खेल्ने चौर, यसो दुई-चार सय अट्ने हल र एउटा भव्य महल त स्वभाविक हो नि ! त्यो पनि ठेक्कापट्टा मिलाई देर पा’को । बुढाले क्यान्टोनमेन्टको चैं नगरेको भा हुन्थ्यो !
त्यही त काका ! दुई तोला सुन र तीन कठ्ठा जग्गा छँदै थियो । के खाउँ के लाउँ भन्ने थिएन । यसो एक दुई अरवको लागि इसारा गर्दा पुगी हाल्थ्यो ।
बढी कुरो नगर भिरघरे ! तेरो देउवा र ओलीको सम्पत्ति छानविन गरेको दिन थाहा हुन्छ । हाम्रो पालो मात्र आओस् त कांग्रेस र एमालेहर्को सम्पत्ति खोसेर….!
खोसेर भन्ने शब्द मिलेन काका ! लुटेर भनन, पहिला त्यसै गरेकै हो ।
भिरघरेले ठिक भन्यो । सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्छ अनि सबैको चुरिफुरी देखिन्छ । लुटेको सम्पत्ति खोसिएपछि नाङ्गोझार !
नकरा झुम्री ! अनि भिरघरे काठमाडौंमा नेकपाको खबर के छ अरे ! हाम्रो काम्रेडले फाइनल हान्ने भनेका थिए । हिजै हाने कि आज हान्छन् !
खै हौ काका ! गोल गर्ने माधव नेपालले होला ! उनका कुरा त्यति बुझिदैनन् । प्रचण्डलाई काँधमा बोकेर हिड्दा शरीर भरी दुर्गन्ध होला ! मोहन विक्रम, मोहन बैद्य, बाबुराम सप्पैलाई पत्रु बनाउने ब्यक्ति यिनै हुन् क्यारे ।
हेर भिरघरे ! राजनीति सरल ढंगले हुँदैन बाङ्गोटिङ्गो नै हुन्छ । अहिले माधवलाई अँगालो मार्ने पछि किक हान्ने । ‘काम लाग्यो भाँडो, आफल तेरो ठाँडो’ त गर्नै पर्छ । बावुराम, मोहन वैद्य सप्पैलाई थुपारेर राख्दा फोहोर हुन्थ्यो । हाम्रो काम्रेडले हुत्याई दिए टन्टै साफ ।
सधै त्यसरी होला र काका ! अब त दुनियाँलाई उनी के हुन भन्ने थाहा भइसक्यो । अब आउने चुनाप पर्खिए हुन्छ । त्यसपछि चितवन, काठमाडौ, इलामतिरका सप्पैले दिउँसै सपना देख्छन् ।
यस्तो बाउँडे कुरा नगर भिरघरे । नेपाली जनता मात्र होइन विश्वका क्रिस्चियन सप्पै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देख्न आतुर छन् । बरु काठमाडौंको कुरो भन्न!
काठमाडौंमा रमिता हुँदै छ काका ! ओली सरकार अब रहँदैन जस्तो छ । ओलीले पनि अब सोच्नु पर्छ । प्रचण्डको हातमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व दिनु हुँदैन । ओलीले अध्यक्ष छाडेर माधव नेपाललाई प्रथम अध्यक्ष बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री चै पाँच वर्ष ओलीले नै चलाउनु पर्छ ।
अनि हाम्रो प्रचण्ड चैं के जुम्रा मारेर बस्नु । अहिलेसम्म पार्टी र सरकार प्रमुख भएर ओलीले चलाए अब प्रचण्डको दुवै चलाउने पालो ।
पालो होइन । अब अन्तिम अवस्थामा केको पालो ? अब चुनापसम्म त हो । त्यसपछि हाम्रो काँग्रेसले २० वर्ष सरकार चलाउँछ । कम्युनिष्टलाई फापेन, पचेन, को नि केलाई घिउ पच्दैन भन्थे । ओलीको रिसले सरकारकै पार्टीका नेताहर्ले आफ्नै सरकार असफल बनाए । नेकपाका नेताहरु कम्युनिष्टले सत्ता कब्जा गरेको ठान्छन् । सत्ता कब्जा होइन त्यही सत्तामा गएका हौं भन्ने बिर्सन्छन् । यही कारणले गर्दा हामी पनि अब आन्दोलनमा आउँदै छौं । प्रचण्डका विद्यार्थी, राजावादीहरु र हामी मिलेर नेपालबाट कम्युनिष्ट समाप्त पार्छौ । यसमा प्रचण्डको पनि साथ रहने छ ।
तेरा भाषण तैंसँग राख भिरघरे । हाम्रो महान गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष काम्रेड प्रचण्डको नेतृत्वमा १०/२० हजार केन्द्रीय सदस्य भएको विशाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर हामी सत्ता कब्जा गर्छौ । र एकलौटी शासन गर्छौ । प्रचण्ड काम्रेडलाई सधैं अध्यक्ष सधैं प्रधानमन्त्री मान्न हामी तयार छौं । अब एमाले ध्वस्त बनाउने हाम्रो योजना सफल भै सक्यो । अब अर्को लक्ष भनेको सत्ता कब्जा नै हो । नेपालको सबै सुरक्षा निकाय कब्जा गर्ने, सबै कर्मचारी वर्खास्त गरेर आफ्ना काम्रेडहर्लाई नियुक्ति गर्ने र हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्ने जनताको संरक्षण गर्ने ।
अनि काका ! प्रजातन्त्र र बहुदल रुचाउने कम्युनिष्ट, हाम्रो कांग्रेस, राप्रपा, मधेशी दल, सेना, पुलिस, कर्मचारी र सर्वसाधारण जनता चैं हातमा दही जमाएर बस्छन् कि क्या हो ।
पहिला जस्तै चन्दा दिनेलाई राख्छौ । हाम्रो विरोध गर्नेहलाई पहिला जस्तै भौतिक कारवाही छदै छ ।
लु देखिस् भिरघरे । बुढाको अपराधी बुद्धि ! अबका युवा युवतीले अझै प्रचण्डहरुले भनेको विश्वास गर्छन् भन्ने ठानेको होला !
काका ! अब ओलीको सरकार ढल्यो भने तिमीले थाहा पाउँछौं सबैकुरा । म अहिले घर हिंडे । अर्को आइतवार आउँला ! जै नेपाल !